कहाँ जान्छ बर्सेनि ९० अर्ब ? – Fewa Times
कहाँ जान्छ बर्सेनि ९० अर्ब ?
प्रकाशित मिति: January 11, 2017 8:11 am
पुस २७, काठमाडौं – नेपालमा बर्सेनि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ । उच्चपदस्थले अनाधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लागानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ ।
सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानी नै शुद्धिकरणको उच्च जोखिमम छ ।
कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्चपदस्थ अधिकारी (पेप्स, पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन) को आर्थिक कारोबार वित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबार समेत एकाइको सूचना पहुँचमा छेन । यो खबर आजको नागरिकमा छ ।
अदालतलाई गुमराहमा राख्ने गोपाल खड्काको प्रयास
होटल सञ्चालिकाविरुद्ध मानव बेचविखन मुद्धा
सांसदलाई विज्ञको कक्षा थोरै तर गहन बोल्नू